I-Valve Yebhola Yethusi
Ukuhola I-Valve Yamahhala Yokucindezela Ibhola
Imikhiqizo Yesistimu ye-HVAC
Indlela yokukhetha i-valve ngendlela efanele
I-anti-corrosion yomzimba we-Brass Ball Valve isekelwe ikakhulukazi ekukhethweni okulungile kwezinto. Nakuba kunezinto eziningi zokulwa nokugqwala, akulula ukukhetha okulungile, ngoba inkinga yokubola iyinkimbinkimbi kakhulu. Isibonelo, i-sulfuric acid igqwala kakhulu ...
Ukukhethwa kwe-valve yethusi
1. Ngokusho kokukhethwa kwemisebenzi yokulawula, ama-valve ahlukahlukene anemisebenzi yawo, futhi kufanele kuqashelwe imisebenzi ehambisanayo lapho kukhethwa. 2. Ngokuvumelana nokukhethwa kwezimo zokusebenza, imingcele yezobuchwepheshe ye-Brass Ball Valve evame ukusetshenziswa ihlanganisa i-workin...
I-WDK ihlangana nomgubho weminyaka eyi-100 wokusungulwa kweQembu LamaKhomanisi laseShayina
Ukuhlangabezana nesikhumbuzo seminyaka eyi-100 sokusungulwa kweQembu LamaKhomanisi laseChina, ukuqaliswa kwesenzo se-China esinempilo sika-2030, ukukhuthaza imithetho kazwelonke yokufaneleka, ngokufika kwehlobo, ukuze wonke umuntu akhulule ingcindezi yomsebenzi, athuthukise ukuxhumana kanye ukubambisana b...
Amaphuzu okunakwa ekufakweni kwe-valve
1. Uma ufaka i-valve, kuyadingeka ukuhlanza ingxenye yangaphakathi kanye nokubekwa uphawu, hlola ukuthi ama-bolts okuxhuma aqiniswe ngokulinganayo, futhi uhlole ukuthi ukupakisha kuhlanganiswe yini. 2.I-valve kufanele ivalwe lapho ifakiwe. 3.I-valve yesango yosayizi omkhulu kanye ne-valve yokulawula umoya kufanele b...
Isimiso sokusebenza se-valve kagesi
I-valve kagesi inezingxenye ezimbili, ingxenye ye-actuator kagesi nengxenye yevalvu. Amandla okushintsha ama-valve avela ku-actuator kagesi. Ngenxa yokuthi i-valve kagesi isebenziseka kalula, ingasetshenziswa kanye nogesi, uma kuqhathaniswa nenani lama-valve okulawula okuzenzakalelayo uma kuqhathaniswa ...
Umbukiso wokuqala we-Yuhuan Plumbing Valve ngo-2021 uzobanjwa ekupheleni kukaSepthemba.
I-Yuhuan iyidolobha laseChina. Ngo-2020, inani eliphumayo lemboni yama-valve yamapayipi e-Yuhuan lafinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-39.8, okubalelwa ku-25% yenani eliphelele lokukhipha imikhiqizo efanayo e-China. Imikhiqizo ithunyelwa emazweni nasezifundeni ezingaphezu kuka-130. I-valve yamapayipi inkulu kakhulu ...
Kusukela ekuqaleni kuka-2021, intengo ye-brass bar ibangele ukukhathazeka komphakathi
ngo admin ku 21-03-06
Kusukela ekuqaleni kuka-2021, intengo ye-brass bar ibangele ukukhathazeka komphakathi. Ngemuva koSuku Lonyaka Omusha, intengo ye-brass bar ibilokhu ikhuphuka, ngaphezu kuka-17%. Kuyaphawuleka ukuthi ngemuva koMkhosi Wasentwasahlobo ngo-2021, intengo yethusi ilokhu ikhuphuka futhi intengo ifinyelela elinye irekhodi phezulu...
Ibhekene nomthelela we-COVID-19
Ithintwe i-COVID-19 ngo-2020. Izindleko zokuthutha izimpahla phakathi kweChina ne-Europe zinyukile njengoba ukuvalwa kobhubhane kubhebhezela ukwanda kokuthenga ku-inthanethi, futhi ukushoda kweziqukathi zokuhamba ezingenalutho kanye nabasebenzi basechwebeni abakhona kuphazamisa ukuhwebelana komhlaba wonke. Izintengo zeziqukathi zomkhumbi sezifike ku-reco...
Siza ozakwethu ukuthuthukisa izimakethe
Mhla zingama-26 kuNhlolanja wezi-2018, iPhini likaMongameli u-Sales Lihong Chen uvakashela ozakwethu bethu besikhathi eside be-Bromic Group. Imizamo kufanele yenziwe ukuze kwaneliswe izimfuneko zozakwethu, usize uzakwethu ukuthuthukisa imakethe.Ukukhiqiza okuyinhloko kuhlanganisa:Ivaluzi Yokuthenga Yekota Yekota ; Ama-Multi Turn Supply Valves ; I-F1960&F1...
© Copyright - 2010-2020 : Wonke Amalungelo Agodliwe.